Aung Win Hein (Noble): 01/31/12
By Sam Mc Bratney,(စာရေးသူ)
Illustrated by Charles Fuge(သရုပ်ဖော်သူ)
Little Roo and his friends usually haveagreat time playing together,
They are too busy making fun of each other.
When everyone is left in bad moods,
Little Roo’s wise mother comes up with an idea that might just help
the threesome make
Little Roo was chasing leaves one windy day to play with him.
“Let’s makeabig pile of leaves,” said Roo.
“A mountain of leaves,” said Country Mouse.
“The biggest ever seen!” quacked Duck.
They began to collect up all the leaves they could find but making
a leaf mountain is hard work,
So afterawhile they stopped forarest.
While they were resting, Little Roo said to friend Quacker Duck,
“I know something you can’t do. You can’t jump overabig, big log.”
Quacker Duck tried as hard as she could,
but little ducks aren’t made to jump over big, big logs.
Country Mouse thought it was so funny when Quacker Duck fell over the fallen-down tree.
“ Don’t you laugh at me!” said Quacker Duck to Country Mouse.
“I know something you can’t do. You can’t float onapuddle.”
“ Yes I can,” said Country Mouse.
So Country Mouse tried to float on the puddle…
butalittle mouse isn’t really made for floating.
Little Roo thought it was so funny when Country Mouse
crawled out of the water, soaking wet and dripping.
“Don’t you laugh at me!” said Country Mouse.
“I know something you can’t do. You can’t catch your own tail.”
“Yes I can,” said Roo.
Roo tried as hard as he could to catch his own tail, to catch his own tail,
but his tail would not be caught. It was too far away.
Country Mouse and Quacker Duck laughed and
laughed as Roo ran around in circles.
“Don’t you dare laugh at me!” cried Roo.
“Well, you laughed at me!” said Mouse.
“And you laughed at me!” said Duck.
No one was happy because each had made fun of someone else
and someone else had fun of them.
Instead of making the biggest mountain of leaves that anyone had ever seen,
they looked as if they might all go home inabad mood.
Little Roo’s mother came over to see what the fuss was about.
“I’m not surprised the three of you look so grumpy,” she said.
“Nobody likes to be laughed at!”
It was true. No one likes to be laughed at.
“Why don’t you show each other what you can do?” said Roo’s mom.
Roo cried, “ I can jump overabig, big log!”
He hopped up and over the fallen-down tree.
“ That’s really good jumping,” the others said.
“I can float onapuddle,” said Quacker Duck, taking to the water with ease.
“That’s really excellent floating!” the others agreed.
And when Country Mouse caught his own tail, Little Roo and
Quacker Duck thought that his tail-catching was the best they had ever seen.
“There now,” said Roo’s mother, “Can we all be friends again?”
Little Roo, Country Mouse,and Quacker Duck looked at one another.
They were all thinking the same thing…
တစ်ခါတုန်းကပေါ့။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ရှိကြပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ ကန်ကရူးလေးရယ်၊
သူတို့တွေဟာ အမြဲတမ်းလိုလို အကြာကြီး အတူတူကစားကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ မကစားနိုင်ကြဘူး။
လေတိုက်တဲ့နေ့တစ်နေ့မှာ ကန်ကရူးလေးဟာ ရွက်ကြွေတွေနောက်ကိုလိုက်နေလေရဲ့။
“တို့တစ်တွေ ရွက်ကြွေတွေကို အကြီးကြီးဖြစ်အောင် ပုံကြရအောင်”
ဘဲလေးကလည်း “ငါမြင်ဖူးတဲ့အထဲမှာတော့ အကြီးဆုံးဖြစ်ရမယ်ဟေ့!”လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ရွက်ကြွေတောင်တစ်ခုကိုလုပ်ရတာ ခက်လှပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ သူတို့တွေ ရပ်ပြီးအနားယူကြတယ်။
အဲဒီလိုနားနေချိန်မှာ ကန်ဂရူးဟာ ဘဲလေးကိုပြောလိုက်တယ်။
“မင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို ငါသိတယ်။ မင်းသစ်တုံးအကြီးကြီးအပေါ်ကို မင်းမကျော်နိုင်ပါဘူး။”
ဒါပေမယ့် ဘဲလေးဟာ သစ်တုံးကြီးမကျော်နိုင်ပါဘူး။
ဘဲလေးဟာ သစ်တုံးပေါ်မှာ လဲကျသွားချိန်မှာတော့ တောကြွက်ကလေးက
တွေး တွေးပြီး အရမ်းရီမိပါတယ်။
ငါသိတယ်၊ရေအိုင်လေးမှာ မင်းကိုယ်မင်း ကိုယ်မဖေါ့နိုင်ပါဘူး”လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်တန်းတော့ တောကြွက်လေးဟာ ရေအိုင်မှာ ကိုယ်မဖေါ့နိုင်ပါဘူး။
မင်းရဲ့အမြီးလေးကိုမင်းပြန်ပြီးမဖမ်းနိုင်ပါဘူး” လို့ ကန်ကရူးလေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့အမြီးကို သူပြန်ပြီးမဖမ်းနိုင်ပါဘူး။အဝေးကြီးကိုရောက်သွားပါတယ်။
ရူးလေးက “မင်းတို့တွေ ငါ့ကိုမရီပါနဲ့”လို့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဘဲလေးက “ဟုတ်တယ်၊မင်းတို့လည်း ငါ့ကိုရီခဲ့ကြတာပဲ ”လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူတို့ကိုကြည့်ရတာ ဒီအတိုင်းဆိုရင် စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပဲ အိမ်ပြန်ရဖို့ရှိတယ်။
“မင်းတို့သုံးကောင်ရဲ့အလွန်ဆိုးတဲ့မျက်နှာထားတွေကိုမြင်ရပေမယ့် ငါတော့ မအံ့သြပါဘူး။
ဒါဟာ အမှန်ပါပဲ။ ဘယ်သူမှ အရီခံရတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။
“မင်းတို့တွေ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို လုပ်နိုင်ကြောင်းပြလိုက်ပါလား”လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကန်ကရူးက အော်လိုက်တယ်။ “ငါ သစ်တုံးအကြီးကြီးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဟေ့!”
သူဟာ မြေကြီးမှာလဲနေတဲ့သစ်တုံးကြီးပေါ်ကို ကျော်လွှားပြီး ခုန်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဘဲလေးကလည်း “ငါလည်း ရေပေါ်မှာ ကိုယ်ဖေါ့နိုင်တယ်” လို့ပြောပြီး၊
အဲဒီနောက် တောကြွက်လေးက သူ့အမြီးကိုသူ လှလှပပဖမ်းပြလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းသုံးယောက်စလုံးဟာ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။
သူတို့ဟာ အတူတူဖြစ်သွားကြပြီးလို့လည်း အားလုံးကတွေးဖြစ်သွားပါတယ်။
မလုပ်နိုင်တဲ့အချက်ကို လုပ်ခိုင်းရုံနဲ့တော့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ခိုင်းတော့ အရည်အသွေးတွေကို ထုတ်ပြခွင့်ရတော့ လူငယ်လေးတွေအတွက်
ပျော်စရာကောင်းသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ်လည်းပိုဖြစ်စေကြောင်းကို ဖေါ်ပြလိုက်တဲ့
သရုပ်ဖော်ပုံကကြီးကြီး၊ စာကနည်းနည်းနဲ့ဆိုတော့ ကလေးအတွက်
တွေ့တော့ အရမ်းကို ကြည်နူးရပါတယ်။
ဒါဟာ အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့လူကြီးတွေရဲ့အစီအမံလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းလွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးဟာ ကစားကွင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားနိုင်သလို
စာကြည့်တိုက်မှာလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် စာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်တယ်။
စာကြည့်တိုက်ထဲကို ကစားကွင်းကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဝင်လာတဲ့ကလေးများ၊
ကံမကောင်း၊အကြောင်းမလှရှာကြတဲ့ မြန်မာပြည်က ကလေးတွေကို သတိရ၊ လွမ်းမောမိပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ နံနက်စာအဖြစ် ယိုဒယားဆန်ပြုတ်ကို သားငယ်ထွန်းဦးနဲ့
ကျောင်းတက်ချိန်နီးနေသောကြောင့် အမေလုပ်သူမနန်းဖောင်းက စိတ်တိုလာပါတယ်။
“ ဟဲ့ ကလေးကို ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ”
အဲဒီနောက် ကျောင်းလွယ်အိတ်ကိုယူပြီးကျောင်းဖက်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ထွက်သွားပါတယ်။
လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲကျန်တဲ့အခါ မိန်းမဖြစ်သူမနန်းဖောင်းက ကိုအေးရွှေကိုမေးပါတယ်။
“ ရှင် ကလေးကို ဘာပြောလိုက်သလဲ၊
“ အော် သားဆန်ပြုတ်မသောက်ရင်
သားရဲ့ဖွားဖက်တော်လေးဟာ ဘယ်တော့မှ ကြီးလာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့”
အဲဒီနောက် ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကိုအေးရွှေရဲ့နဖူးကို ဇွန်းနဲ့ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
“ ဟဲ့…မိန်းမ ဘာဖြစ်လို့ ငါ့နဖူးကို ခေါက်ရတာလဲ”လို့မေးလိုက်ပါတယ်။
“ ရှင် ငယ်ငယ်တုန်းက ဆန်ပြုတ်မှန်မှန်မသောက်ခဲ့လို့”